Achingnye ọzụzọ & Ngwaahịa
Nkwanye ugwu - ihe ịga nke ọma dị mfe!
Ka ihere dịrị gị
Ekwu okwu, kwuokwuo
Gaa nke ọma ruo mgbe ebighị ebi
Tụgharịa mgba ọkụ
Ree dị ka anwansi
Akwụkwọ a nzukọ nzukọ
Ihe ịga nke ọma gị abanyelarị n'ime gị ...
Nkwanye ugwu bu ikike anwansi nke n’eme olu ebube, ogwu puru iche nke oma, ma obu ihe anaghota na anyi nile enweghi akwukwo ulo akwukwo n’isiokwu a di nkpa site na akwukwo mbu.
Ọ bụ ya mere m ji dee akwụkwọ a maka onye ọ bụla dị ka m, ndị gbalịrị ogologo oge ma ha anaghị enwe ọganihu dịka ha chọrọ ma tosie ya.
Na "pectkwanyere - ihe ịga nke ọma dị mfe" M na - egosi gị usoro anwansi, egosiri m gị otu esi adị mfe na mfe mgbe ọ bụla ị ga - eru elu, na ihe ịga nke ọma gị niile na maka abamuru nke mmadụ niile.
Rịọ akwụkwọ n'efu ugbu a
Kedu otu nkwanye ugwu si arụ ọrụ, otu anyị nwere ike isi weta nkwanye ùgwù karịa na mmekọrịta niile yana otu esi egosipụta ekele na ngwa ngwa - nke ahụ bụ ihe m kọwara n'akwụkwọ ahụ.
Ọ bụrụ na ị dị ka m, enweghi ndidi ma nwee ntụkwasị obi ma na-achọ ihe ịga nke ọma, mgbe ahụ ịnye ọzụzụ nwere ike ịbụ naanị ihe maka gị ... Site na onye ndụmọdụ n'akụkụ anyị, ọ bụghị naanị ngwa ngwa ma dịkwa mfe, ọ chọkwara obere nyocha na njehie. .
Chọpụta onwe gị na a free 45 nkeji atụmatụ okwu m. Ha na-ekwu na oge bụ ego. Ma karia nke a, enwere ugwo ohere, ihe nleghara anya, igbu oge, igbu oge, ergo nke ida. Efu ndị ị na - enweghị ike ịhụ ma ghọta nke mechara mee anyị nnukwu ihe.
Chọta m na-esote n'efu n'efu ugbu a - m na-atụ anya ya!
Free 45-min. Akwụkwọ a nzukọ nzukọ
Nkwanye ugwu - oganihu di nfe
You bụ onye ọchụnta ego, ọrụ onwe gị ma ọ bụ omenkà?
You na-arụ ọrụ nke ukwuu na nrọ nke ịnweta ikuku karịa?
Youchọrọ inwe ike nweta ọnụahịa ka mma na ụgwọ dị elu maka ọrụ gị kachasị elu na ahịa?
Ka ị̀ chọrọ ka ihe dị mfe, ka mma ma nwekwa ọ enjoụ?
Mgbe ahụ ịkwesịrị ịhapụ otu n'ime ike kachasị ike enwere ọrụ maka gị - kama itinye ike na-enweghị ngwụcha n'ime ọrụ gị.
M na-ekwu maka nkwanye ugwu. Nke ezigbo, ezigbo nkwanye ugwu maka onwe gị na gburugburu gị. Ihe na-eme ga-eju gị anya. Ọ dị mfe, ngwa ngwa na mma ...
Ọ bụ naanị mmadụ ole na ole ghọtara ya.
Nkwanye ùgwù bụ isi - ma ị ga-eji ya ugbu a. Maka abamuru nke ndi ahia gi, ezi na ulo gi.
(02: 28, German)
Obi ụtọ dị ukwuu!
(03: 49, German)
Nkwanye ugwu bu ike kachasi ike na obodo anyi. Anyị amachaghị banyere ya n'ụlọ akwụkwọ, ma ya fọdụzie ịghọta otu esi eji nsọpụrụ eme ihe kwa ụbọchị maka abamuru nke onye ọ bụla metụtara.
Achọpụtara m nke a n'onwe m mgbe ọtụtụ afọ gachara na ọrụ ahụ, nwunye m abụkwara m otu oge na obstetrician and trainer.
Na ihe ịtụnanya bụ: naanị ihe ọmụma ezughi oke.
Ọbụna mgbe m kwenyere na m ghọtara echiche ahụ, ọ were ọtụtụ afọ nke omume na itinye akwụkwọ iji chọpụta ọtụtụ nkọwa gbasara ekele na nkwanye ùgwù, na ịghọta usoro dị n'azụ ya.
Onye ọ bụla nwere ike ime otu ihe ahụ, chọpụta ya n'onwe ya - ma tinye ọkara ndụ ọkachamara maka ya ...
Mana ọ bụrụ n’inweghi ndidi, na-achọkarị ịmata ihe, na agụụ na-agụ m, dịka m, a ga m enwe obi-ụtọ igosi gị aha a. Ọ dị mfe ...
dika umuaka si eme: buru uzo mee ya - ghota ya.
Ihe ị ga - eme, nwayọ, aga m egosi gị ma obi ga - adị m ụtọ iso gị. Ọ bụrụ na-amasị gị. Ihe ijuanya na-ekwe nkwa, n'amaghi ihe ịga nke ọma ewepu.
Banye maka a free atụmatụ okwu na mụ na ka anyị hụ ihe na-aga na gị. Ana m atụ anya ịmata gị onwe gị.
JT Foxx Chicago - Nkwanye isgwù bụ ntọala nke ihe niile
Mba 1 nchịkwa azụmahịa, serial entrepreneur, ezigbo ala na ụlọ na onye ọchụnta ego onwe, JTFoxx na ike nke nkwanye ùgwù na ahụmịhe ya na Juergen na mmemme azụmahịa ụbọchị 5 na London.
(02: 27, German)
Patrick, onye ọchụnta ego, 8: 1 na-enye ọzụzụ maka izu 1.
Achọpụtara m oke m, mezue ihe m lekwasịrị anya, mee ka ntụkwasị obi m nwekwuo ike, chọta echiche ọhụrụ ma weta azụmahịa ahụ n'ihu. Ọ bara uru, kwadoro.
Irem, nwa akwukwo iwu na onye ahia ya na ndi mmadu na-acho banyere ndi mmadu na ndi Juergen, n'etiti oge Corona.
(00: 27, German)
Olu Mba Nile Maka Nkwanye .gwù
Ajụjụ ọnụ banyere "pectkwanyere" gburugburu ụwa na 2019 na 2020.
Fred Fishback, Onye isi oche nke Javelin Industries - Nkwanye .gwù
Nkwanye ùgwù - ihe dị oke mkpa ma dị mkpa taa.
Echiche nke ịkwanyere ugwu bụ ntọala, ọ bụ ihe ị ga - ebu ụzọ chịkwaa.
Anyị chọrọ ịdị mfe nke echiche a.
Echere m na ị nọ na ihe dị oke mkpa ma enwere m obi anụrị ihe ị na-eme Juergen.
Nkwanye ugwu bu mgbakwasike nke nmeko anyi,
nkwanye ùgwù bụ ntọala nke ùgwù onwe onye,
nkwanye ùgwù bụ ntọala nke uto ọzọ.
Obi dị m ezigbo ụtọ na ihe ị na-eme, ọ bụ echiche siri ike.
Nzukọ na London's Prestigious Law Society
Abridged Ajụjụ ọnụ banyere "pectkwanyere" na a Business Conference 2020 na London si ugwu Iwu Society.
Na-asọpụrụ Ajụjụ ọnụ Hilton London Metropole
Abridged "Na-asọpụrụ" Ajụjụ ọnụ 2020 na Hilton London Metropole Paseeji
(01: 29, German)
Enwere m ụgwọ dị ukwuu, ọ na-etinye ihe niile n'ime ọrụ ya, na-emeghe ụwa ma ọ naghị atụ egwu mgbanwe, ọ naghị atụ ụjọ ihe ịma aka ... N'ime ọnwa isii m matara ya, ọ nyeere m aka nke ukwuu n'echiche nke onwe m, ị ga-apụ na mgbakwunye tinyere mgbakwunye.
Ndị otu mpaghara na DigiMember